Fantaro ny trangan'ny fanondranana Forex. | FXCC Risk Disclosure
Home / About / 24 / 5 SUPPORT / Risk Disclosure
Ny mpividy dia tsy tokony handray anjara amin'ny fampiasam-bola mivantana na tsy mivantana amin'ny Financial Instruments raha tsy fantany sy takany ny mety ho voka-dratsiny ho an'ny tsirairay amin'ny Financial Instruments. Noho izany, alohan'ny hampiharana ny kaonty iray dia tokony handinika tsara ny mpanjifa raha toa ka mahasoa azy ny fampiasam-bola amin'ny sehatra ara-bola manokana amin'ny alàlan'ny tarehin-javatra sy ny harena ara-bola.
Ny mpanjifa dia nampitandremana ireto loza manaraka ireto:
Ny orinasa dia tsy afaka manome antoka ny kapitalina voalohany amin'ny portfolio an'ny mpanjifa na ny sandany amin'ny fotoana rehetra na amin'ny vola entina amin'ny fitaovana ara-bola rehetra.
Ny mpividy dia tokony hiaiky fa, na inona na inona fampahalalam-baovao mety atolotry ny orinasa, ny sandan'ny fampiasam-bola ao amin'ny Financial Instruments dia mety hikorontana any ambony na any ambony ary mety hitranga mihitsy aza fa mety tsy hisy vidiny ny fampiasam-bola.
Tokony hanaiky ny mpanjifa fa mety hampidi-doza ny fatiantoka sy ny fahavoazana vokatry ny fividianana sy / na ny fivarotana fitaovana ara-bola rehetra ary manaiky fa vonona ny hanao izany loza izany izy.
Ny fampahalalana momba ny zava-bita teo aloha teo amin'ny fitaovana ara-bola dia tsy manome antoka ny fampisehoana amin'izao fotoana izao na / na ho avy. Ny fampiasana ny antontan-kevitra ara-tantara dia tsy fiheverana na fandaniam-potoana momba ny hoavin'ilay asa ara-bola mifandraika amin'ny ho avy ao amin'ny Financial Instruments izay ilazana izany fampahalalana izany.
Ny mpividy dia manoro hevitra fa ny fifampiraharaham-barotra natao tamin'ny alàlan'ny serivisy ho an'ny orinasa dia mety ho karazana sintomina. Mety ho very ny fahavoazana mety hitranga ao anatin'ny fotoana fohy, mitovy ny totalin'ny vola napetraka amin'ny orinasa.
Ny fitaovana ara-bola sasantsasany sasany dia mety tsy tonga dia mivantana avy hatrany noho ny fangatahana fohy ary ny mpividy dia mety tsy afaka mivarotra azy ireo na mora mahazo vaovao momba ny lanjan'ireny Financial Instruments ireny na ny haben'ny loza mifandraika amin'izany
Raha misy fitaovana ara-barotra mifandraika amin'ny vola hafa ankoatry ny volan'ny fonenan'ny mpanjifan'ny mpanjifa, ny fiovana rehetra amin'ny fifanakalozana dia mety hisy fiantraikany ratsy eo amin'ny sandany, ny vidiny ary ny vokatra.
Ny fitaovana ara-bola eo amin'ny tsena vahiny dia mety hampidi-doza ny fahasamihafan'ny tsena mahazatra eo amin'ny toeram-ponenan'ny mpanjifa. Amin'ny toe-javatra sasany dia mety ho lehibe kokoa ireo loza ireo. Ny fiheverana ny tombom-barotra na ny fatiantoka amin'ny fifanakalozana eo amin'ny tsena vahiny dia misy fiantraikany amin'ny vidin'ny fifanakalozam-bola.
Ny singa ara-bola fanivanana (toy ny safidy, ny hoavy, ny fahatany, ny fanatanjahantena, ny CFD, ny NDF) dia mety ho fifanakalozan-drivotra tsy misy fandefasana manome tombony amin'ny fiovan'ny toetr'andro, ny tsena, ny indostria ara-barotra na ny vidin-javatra antsoina hoe fitaovana fototra . Ny sandan'ny Sampanasa ara-bola ho an'ny Derivative dia mety ho voakasika mivantana amin'ny vidin'ny fiarovana na fitaovana hafa fototra izay tanjon'ny famerenana.
Ny sanda ara-bola / ny varotra dia mety ho tsy misy dikany. Ny vidin'ny "Derivative Financial Instruments", anisan'izany ny CFDs, sy ny tahiry fototra sy ny Indices dia mety hivezivezy haingana sy any amin'ny faritra maromaro ary mety hitaratra ny fisehoan-javatra tsy hay hazavaina na ny fiovan'ny fepetra, izay tsy misy azo fehezin'ny mpanjifa na ny orinasa.
Ny vidin'ny CFD dia hisy fiantraikany amin'ny fanovana ny fangatahana fanampiana sy fangatahana fifandraisana, ny governemanta, ny fambolena, ny varotra ary ny varotra sy ny politika, ny sehatra ara-politika sy ara-toekarena nasionaly sy iraisam-pirenena ary ny toetra ara-psikolojika mahakasika ny toerana misy ny tsena.
Ny mpanjifa dia tsy tokony hividy fitaovana ara-bola afa-tsy ny fanivanana, raha tsy vonona ny hanao ny mety ho very ny vola rehetra napetrak'izy, ary koa ny komisiona fanampiny sy ny fandaniana hafa.
Amin'ny toe-javatra sasany eo amin'ny tsena, mety sarotra na tsy azo atao ny manatanteraka baiko
Ny fametrahana lozam-pifamoivoizana dia manampy amin'ny famerana ny fahaverezanao. Na dia eo aza ny fepetra ara-barotra sasany dia mety ho ratsy kokoa ny famonoana ny Lozam-pifamoivoizana noho ny vidiny voatokana ary ny mety hitranga dia mety ho lehibe noho ny efa nandrasana.
Raha toa ka tsy ampy ny renivohitra marihina mba hihazonana ny toerana misy amin'izao fotoana izao, dia mety hantsoina ianao hametraka vola fanampiny amin'ny fotoana fohy na hampihenana ny fisorohana. Ny tsy fanaovana izany amin'ny fotoana takiana dia mety hitondra ny famafana ny toerana amin'ny fahaverezana ary ho tompon'andraikitra amin'ny fiantraikany rehetra ianao.
Ny Banky na Broker amin'ny alalan'ireto orinasa izany dia mety hanana tombotsoa mifanohitra amin'ny tombontsoanao.
Ny tsy fanarahan-dalan'ny orinasa na Banky na Broker ampiasain'ny orinasa hanatanterahana ny fifanakalozam-bola dia mety hitondra any amin'ny toerana misy anao miala amin'ny sitraponao.
Ny fiheveran'ny mpanjifa dia misintona an-tserasera amin'ny vola nomanina tsy ara-potoana na tsy misy fotoana ka tsy azo antoka fa ny vidiny dia hozaraina amin'ny fotoana rehetra na fa mety sarotra ny manatanteraka ny fifanakalozam-bola amin'ny vidiny izay mety ho voatanisa noho ny tsy fisian'ny counter fety.
Ny varotra an-tserasera, na tsara toy ny mahasoa na mahomby, dia tsy voatery hampihena ny risika mifandraika amin'ny varotra vola
Misy ny mety hitranga amin'ny fivarotan'ny mpanjifa amin'ny Financial Instruments dia mety ho lasa ambany fananana sy / na adidy hafa noho ny fiovan'ny lalàna na ny toe-javatra iainany manokana. Ny orinasa dia tsy manome antoka fa ny haba sy / na ny adidy aman'entana hafa dia tsy azo atao. Ny mpandraharaha dia tokony ho tompon'andraikitra amin'ny haba sy / na adidy hafa izay mety hampiakatra ny fanaovany ny varotra.
Talohan'ny nanombohan'ny mpividy ny varotra, tokony hahazo ny antsipiriany momba ny kaomisiona rehetra sy ny fiampangana hafa ho an'ny tompony izy. Raha toa ka tsy misy volavolan-draharaham-bola (fa ohatra ho toy ny fifandirana), ny mpanjifa dia tokony hangataka fanazavana an-tsoratra, anisan'izany ireo ohatra sahaza, mba hametrahana ny fiampangana toy izany amin'ny vola miditra manokana
Ny orinasa dia tsy hanome ny mpanjifa amin'ny toro-hevitra momba ny fampiasam-bola mifandraika amin'ny fampiasam-bola na trosa mety amin'ny fampiasam-bola na manao tolo-kevitra amin'ny fampiasam-bola isan-karazany
Ny orinasa dia mety takiana hitazona ny volan'ny mpanjifa amin'ny kaonty iray izay voafaritry ny mpanjifa hafa sy ny volan'ny orinasa araka ny fitsipika amin'izao fotoana izao, saingy mety tsy hividy fiarovana tanteraka izany
Ny fifampiraharahana eo amin'ny sehatry ny varotra Online dia miteraka loza
Raha manaiky ny fifampiraharahana amin'ny rafitra elektronika ny mpividy, dia ho voasariky ny loza ateraky ny rafitra izy, anisan'izany ny tsy fahampian'ny fitaovana sy rindrambaiko (Internet / Servers). Ny vokatry ny tsy fahombiazan'ny rafitra dia mety hoe ny didiny dia tsy novonoina araka ny torolalana nataony na tsy novonoina na oviana na oviana. Ny orinasa dia tsy manaiky ny tompon'andraikitra amin'ny tranga tahaka izany
Mety ho voarakitra an-telefaona ny resadresaka an-telefaona, ary hanaiky ny fandraketana an-tsoratra toy izany ho porofo manamarina sy mampifanaraka ireo torolàlana
Ity fampatsiahivana ity dia tsy afaka manambara na manazava ireo risika rehetra sy ireo lafiny manan-danja hafa mifandraika amin'ny raharaha amin'ny Financial Instrument sy ny tolotra fampiasam-bola